रुख विना मानव जीवन सम्भव छ ? - ISET-Nepal
विश्वको कुरा त परको हो हाम्रो शहर वरपर नै हेरौं । खै कहाँ गए ती रुखहरु ?
यति धेरै नेताहरु जन्माउने यो देशले एक सही योजनाकार किन जन्माउन सकेन् जस्ले वातावरण र विकासलाई सगँ सगै लग्न सकोस् । आजको यस युगमा घर र रुखको प्रतिस्पर्दामा बिचरा रुखले हार्नु प¥यो । जुन हाम्रा लागि दुभाग्यको कुरा हो ।
विकासका नाममा रुखहरु काटिन लागेको देख्दा हाम्रा अघिल्ला पुस्ताका आत्महरु कति रुन्छन् होलान् ? उनीहरुले त रुखलाई आफ्नो दिनचर्यामा राखेका थिए । रुखबाट ठाँउको नाम राखिन्थ्यो । पिपलबोटे र खरिबोटका नाम भएका धेरैनै ठाँउहरु हामीले सुनेकै छौं । त्यस्तै चाड पर्व आदिमा पनि रुखको विशेष महत्व रहको छ । काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुर सबै ठाँउमा मनाइने मछिन्द्रको जात्रामा रुखबाट बनेको रथनै प्रयोग हुन्छ, मन्दिरमा प्रयोग भएका झ्याल, ढोका र टुडाँलहरु सबैनै काठले बनेका हुन्छन् । फागु पूर्णीमामा बसन्तपुरमा गाडिनेदेखि भक्तपुरको बिस्केट जात्रमा ठडाँइने लिङ्ग पनि त रुखकै हुन । केही कुराको छलफल र निर्णय गर्नु प¥यो भने रुखको फेदमा बनेको चौतारामा बसेर गरिन्थ्यो । फेरि हाम्रा घरका झ्याल, ढोका, कुर्सी, टेवल आदि सबै काठकै हुन । खै किन बिर्सेका यी कुराहरु हामीले । के हामीले साँच्चनै त्यो पाँच वर्षको बालकझै रुखको महत्व नबुझेकै हो त ?
Article posted at www.parisambad.com on July 6, 2019